Kooxda Horseed oo guul soo xirtay wajiga hore ee Horyaalka Somali Premier League kaddib markii ay ka adkaatay Heegan – Gool FM
(Muqdisho) 25 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa guul soo afjartay wareegga koowoad horyaalka Somali Premier League kaddib markii ay shalay 1-0 ugu taqalustay naadiga Heegan, ciyaar ka dhacday garoonka Eng Yariisow Stadium.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan labadan kooxood ayaa soo bandhigeen kubbad aad u qurux badan taas oo ay jecleysteen taageerayaashii u soo daawashada tagay kulanka loogu magac daray kulanka ciidanka, maadaama labadan kooxood ay hoos tagaan ciidamadda Booliska iyo ciidanka xoogga.
Wiilasha Horseed guushii ay gaartay waxaa ka caawiyay ciyaarahankeeda lagu magacaabo Hanad, kaas oo u dhaliyay goolka madiga ah ay ugu adkaadeyn kooxda Heegan.
Naadiga Horseed ayaa sanadkaan ku jirta bandhig aad u wacan tiiyo ay jirto inay rabto inay soo afjarto abaarta ka haysata ku guuleysi la’aanta horyaalka Somali Premier League.
Hoggaamiyaha kooxda Horseed Cabdijoon ayaan waligiis isagoo macallin ah ku guuleysan horyaalka Somali Premier League, balse sanadkaan ayuu raba inuu riyadiisa ku aaddan ku guuleysi la’aanta horyaalka soo gabagabeeyo.
Horseed ayaa iminka leh 18-dhibcood, iyadoo ku jirta booska saddexaad ee kala sarreynta horyaalka kaliya booska labaad waxaa loogu hayaa farqiga goolasha waxaana ay ugu haysaa naadiga Elman.
Ugu dambeyn kulankii shalay dhaxmaray kooxaha Horseed iyo Heegan ayaa ku soo dhammaaday 1-0 ay guusha ku raacday Wiilasha Horseed.